Armband Elastiek - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Armband Elastiek)
Ukapteni webhola lezinyawo owenziwe ngokwezifiso i-Elastic Armband
Wonke amaqembu adinga ukaputeni futhi wonke ukaputeni udinga umdlalo wezemidlalo. Ukaputeni wethu obambile angakhombisa wonke umuntu ophethe iqembu lebhola lezinyawo ukugcina umphathi wakho ebonakala enkundleni. Zibalulekile ezenzweni zokuzilolonga nezomdlalo. Le armband yezemidlalo inwebekile futhi ibe nokuvalwa...
OKUFANELEKILE: Lezi ze-Elastic Armband zenziwe nge-quight ye-hight enombala okhanyayo. Ingena kahle engalweni ye-rugby ne-skipper yebhola, ilula indawo efanelekile. ISIPHETHO: I-Armband Elastiek ingu-13 "yinde ne-2.8" ububanzi. Kuyinto kakhulu nokunwebeka futhi ilungele abantu abadala nezingane. I-band...
I-ELASTIC FUTHA KAKHULU - Lokhu kungukaputeni obambile, okhanyayo futhi ongaguquguquki. Kwenziwe ngendwangu eqonde phezulu evumelana ngokungazelele engalweni yomholi wakho okhuthazayo. WPLPLICABLITY WONKE - Le midlalo yezemidlalo, ilungele uhla olukhulu lwemidlalo yeqembu, kusukela ebhola nebhola lombhoxo kuya...
UCaptain Armband weSoka lebhola lezinyawo e-Colourful
I-Elastic Armband yethu yenziwe ngezinto ezinobungani besikhumba - i-nylon kanye ne-spandex. Nge-hook enkulu enamandla ne-loop, akudingeki ukhathazeke ngayo uma iwela engalweni. Le Sport Armband inemibala ehlukahlukene ongayikhetha, ngakho-ke ungabeka izinduna ezahlukahlukene lapho udlala imidlalo. Ungase futhi wenze...
I-Sport Armband yethu inyatheliswa ngemicu ephezulu ye-elyes polyester ephezulu. Lokhu kuqinisekisa ukuthi i-Elastic Armband ihlala inhle isikhathi eside futhi ayishisi ngenkathi ihlamba. Ngensizakalo yethu eyenziwe ngokwezifiso, ungaphrinta uhlamvu C noma noma iyiphi enye iphethini noma umbhalo kukaputeni we-armband....
ICaptain yethu i-Elastic Armband yenziwa ngebhendi ye-elastic supple, elingana kahle nengalo yakho. Leli siko elibanzi le-75mm elenziwe i-Armband Elastiek liyatholakala kuwo wonke amasayizi wezingane nabadala. Ungase futhi wenze ngezifiso ezinye osayizi kaputeni we-elmband. Le Sport Armband ilungele amakilabhu...
Onguquguqulwayo weBhola eKhulu yeBhola yeBhola ye-Elastic Armband Yezemidlalo
Ukupakisha: 200pcs / polybag, 2000pcs / ibhokisi. iphakheji yangokwezifiso.
Onguquguqulwayo weBhola eKhulu yeBhola yeBhola ye-Elastic Armband Yezemidlalo Yenziwe ngendwangu ye-nylon ethokomele, le Elastic Armband ifanela kahle engalweni yakho, ikunikeze induduzo engakaze ibonwe. Idizayini ye-elastic and hook-and-loop yenza le Armband Elastiek iguqulwe kakhulu ngosayizi wawo wonke umuntu....
Amabhendi we-Elastic Running Reflective E-Arm Noma Ankles
Ukupakisha: I-50piece / i-polybag, i-1000ket / ibhokisi
Ezokuphepha - Akungatshazwa ukuthi le yithuluzi elungele abantu abagijimayo, abahamba ngamabhayisekili neminye imidlalo yangaphandle ebusuku. Ukukhanya okubonakalayo okushelelayo kusiza ukwandisa ukubonakala kwabahamba ngezinyawo ngento eyisihlanu. Ukubonakaliswa kwe- armband elastiek kuboniswa kakhulu indwangu...
I-Soccer Soccer Soccer & Sport accessories uCaptain Armband
I-Soccer Soccer Soccer & Sport accessories uCaptain Armband Ukaputeni u-armband wenziwa nge-inayiloni enobungani besikhumba. Kuyindlela yomdlalo osayizi omkhulu owenzelwe abantu abadala. Imicu yokuqamba ye-anti-drop isetshenziselwa ukuvimba ingalo ukuthi iwele ngesikhathi sokuhamba kanzima. Ungakwazi ukwelula...
I-Custom Logo yebhola lezinyawo le-Rainbow uCaptain Armband
I-Custom Logo yebhola lezinyawo le-Rainbow uCaptain Armband DLALA NGE-PRIDE: Hola iqembu lakho ekunqobeni naleli bhendi leqembu lamaqembu asezingeni elithile lemidlalo yazo zonke izinhlobo I-ONE-SIZE: Abaholi beza ngazo zonke izinhlobo nosayizi; lo mdlalo wokulwa uzolingana nezingane eziningi! IVIKI LOMSONTO: Bukeka...
I-Custom Logo yebhola lezinyawo uCaptain Armband
I-Custom Logo yebhola lezinyawo uCaptain Armband DLALA NGE-PRIDE: Hola iqembu lakho ekunqobeni ngalesi situlo sebhola lomnqakiswano sebhola lezemidlalo elezo zonke izinhlobo I-ONE-SIZE: Abaholi beza ngazo zonke izinhlobo nosayizi; lo mdlalo wokulwa uzolingana nezingane eziningi! IVIKI LOMSONTO: Bukeka kahle kakhulu,...
I-Fa Childrens uCaptain Armbands Uyathengiswa
I-Fa Childrens uCaptain Armbands Uyathengiswa DLALA NGESITOLO: Hola iqembu lakho ekunqobeni ngalezi zinhloko zakudala ezihambelana nemidlalo yazo zonke izinhlobo I-ONE-SIZE: Abaholi beza ngazo zonke izinhlobo nosayizi; lokhu armband nokunwebeka kuzofanela izingane eziningi! IVIKI LOMSONTO: Bukeka kahle kakhulu, noma...
I-Refurnational Armband Wristband yeJogging / Cycling / Walking
I-Refurnational Armband Wristband yeJogging / Cycling / Walking Idizayini yemiklamo ekhombisa kabili ithuthukisa ukubonakala ekukhanyeni okubuthakathaka noma ubusuku. Izicupho ezihlala isikhathi eside nezici lokugoqa zihlanganisa ukushesha okulula Ihlala isikhathi eside, ingasindi futhi ithambile ukugqoka Ukubonakala...
Ithimba lebhola lezinyawo le-Elastic Adjusable uCaptain Armband
Ithimba lebhola lezinyawo le-Elastic Adjusable uCaptain Armband Emidlalweni yeqembu, ukaputeni weqembu uyadingeka njalo. Noma ngabe ukubiza uhlamvu lwemali ebholeni ebholeni, ukuya ocansini enkantolo ye-basketball, noma ukuxhawula izandla phambi kwezinhloso zebhola, ukaputeni uyisisekelo esingokomoya seqembu. Le...
Owenziwe ngeziqu webhola le-rainbow uCaptain Armband
Owenziwe ngeziqu webhola le-rainbow uCaptain Armband Indwangu - indwangu ye-elonic ye-ellon, ekhululekile ukugqoka Ukufaka isicelo - ukuswakama okukhulu, kulungele abantu abadala nentsha, akulungele izingane ezingaphansi kweminyaka engu-16. Ukomelela - Imivimbo yokuqina yangaphakathi nemichilo ye-loop yangaphakathi...
Ubukhulu obukhulu I-Orange Team Yezemidlalo uCaptain Armband
Ubukhulu obukhulu I-Orange Team Yezemidlalo uCaptain Armband UMGOMO OCWENGILEKILE - Indwangu ye-Nylon elastic enemfashini ne-orange egqamile. Kulula ukuyihlanza futhi ikhululekile ukugqoka. I-ADJUSTABLE - Kubonakala ngokugqamile okubonakalayo okuhlanganayo nge-loop ye-hook ngosayizi ongashintshwa .Lawa midlalo...
ICustom Running Elastic Reflective Armband Yezemidlalo I-armband yethu ekhanyayo ebonakalayo yenziwa ngethoni ephezulu yesiliva ekhombisa ukunwebeka (isibonakaliso esinamandla kunento ejwayelekile). Ingabonakala kusuka ezinyaweni ezingaphezu kwenkulungwane, azikho amabhethri adingekayo, akukho zindleko ezengeziwe....
Ezemidlalo uCaptain Youth Striped Armband Junior
Dlala Ngokuziqhenya: Le kaputeni yezemidlalo yama-armband angahola iqembu linqobe, lilungele zonke izinhlobo zemidlalo I-One size Fit Iningi: Ingxenye evaliwe ye-hook loop ingashintshwa kalula ukuze ilingane nengalo. Le armband yokunwebeka ilungele iningi labantu abadala! IViki lamaQhawe: noma ngabe ungabanqobi...
Ukaputeni webhola lezinyawo uSleeve Armband
Ukaputeni webhola lezinyawo uSleeve Armband Umkhono wethu webhola lezinyawo owenziwe nge-sleeve armband wenziwe nge-inayoni enobungozi kwesikhumba futhi ukhululekile ukugqoka futhi ulungele bonke abantu abadala nentsha. I-armband yezemidlalo ivumelana nezimo futhi ivumelana nezimo, ayiqinile futhi ayidali ukungalungi...
Armband Elastiek armband elastiek Amabhendi we-Elastic Ankle I-Wrist Support band Elastic Ibhendi ye-Elastic nge-Buckle Ibhendi ye-Elastic Flexible Ibhendi ye-Elastic Eguqukayo Amabhendi we-Elastic Wrist Support